Dowlada Maraykanka oo soo dhoweysay qabashada doorashada Guddoonka Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Dowlada Maraykanka oo soo dhoweysay qabashada doorashada Guddoonka Baarlamaanka
Dowlada Marayanka ayaa soo dhoweysay qaabka loo qorsheeyay qabashada doorashada Guddoonka Baarlamaanka oo dhowaan ka dhacaysa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Dowladda Mareykanka John Kirby ayaa War-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay wax lagu farxo in ay tahay in waqti kama dambayn ah loo qabto xilliga ay dhaceyso Doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.
Hase ahaatee Kirby ayaa ku celiyay walaaca ay dowlada Maraykanka ka qabto musuqmaasuqa ka jira doorashada dalka Soomaaliya waxana uu ku baaqay in ay ilaaliyaan dhaqanka hufan islamarkaana si cadaalad ah loo dhamaystiro kuraasta aan la dooran ee ka harsan baarlamaanka.
Dowlada Maraykanka ayaa waxa ay hore ugu digtey inay musuqmaasuq ku kacaan muwaadiniinteeda ka mid ah dowlada Soomaaliya.
Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo Gudbiyey Mooshin